Ciidamada NATO oo dilay 4 qof oo Somali ah meydkoodiina badda ku aasay +Sawiro – SBC
Ciidamada NATO oo dilay 4 qof oo Somali ah meydkoodiina badda ku aasay +Sawiro
Markab dagaal oo laga leeyahay wadanka Denmark oo ka mid ah xulufada NATO ee hawlgalka loogu magac darey la dagaalanka burcad badeeda ka wada xeebaha Soomaaliya ayaa la xaqiijiyey inay laayeen dhalinyaro Soomaali ah oo lagu tuhunsan yahay inay ka mid yihiin kooxaha burcad badeeda.
War ka soo baxay taliska ciidamada Denmark ayaa lagu sheegay in ciidamadoodu dileen afar nin oo burcad badeed ah, isla markaana ay ka sii daayeen 16 qof oo shaqaale ah oo lagu haystey dooni. Taliska ciidamada NATO waxay sheegeen in israsaaseyn xoogan oo dhexmartey ciidamadooda & kooxda Soomaalida ay ku dhinteen afar burcad badeed ah, halka sidoo kale 10 kale ay ku dhaawacmeen.
Iska horimaadkan oo ka dhacay xeebaha Soomaaliya subaxnimadii Khamiista ciidamada Denmark waxay wateen markabka dagaal ee lagu magacaabo Esbern Snare iyadoo burcad badeedu ay wateen dooni kaluumaysi oo laga leeyahay Iiraan taasi oo ay u adeegsadaan hawlgalada afduubka.
Warsaxaafadeed ka soo baxay Taliska ciidamada Denmark ayaa lagu sheegay in afartii nine e Soomaalida ahaa ee burcad badeeda lagu tuhunsanaa badda lagu duugay.
Warsaxaafadeedka waxaa kaloo lagu sheegay in ciidamada Denmark ee saarnaa markabka dagaal ee Esbern Snare aanu wax khasaare ah ka soo gaarin rasaas iswaydaarsigii.
“Afartii burcad badeeda ahaa ee la diley, waxaa lagu duugey badda, taasi oo ku timid sida uu qabo xeerka NATO iyo dhaqanka Muslimiinta” ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay taliska ciidamada Denmark.
Kenneth Nielsen oo ah afhayeen u hadley taliska ciidamada Denmark wuxuu sheegay la haystayaashii Iirinaaniyiinta ee la badbaadiyey ay haatan caafimaad qabaan.
24 nin oo lagu sheegay inay burcad badeed yihiin ayaa ciidamada Denmark waxay sheegeen in ay ku dul hayaan markab dagaal iyagoo sugaya go’aanka xukuumada Denmark ee la xiriira qaabkii looggu soo oogi lahaa dambiyada lagu soo qabtey.
“Inagoo ku guda jirna hawlgal roondo ah oo aan ka wadney xeebaha Soomaaliya ayaa subixii Khamiista waxaa markabka dagaal ee Esbern Snare uu la kulmay dooni ay wateen burcad badeeda Soomaalida taasi oo aheyd mida ay u adeegsadaan falalka afduubka ayna ku qaataan sahayda, markii markabka dagaal uu isku dayey in uu joojiyo doonida isagoo adeegsanayey codbaahiye lagula hadlayey, waxay soo rideen rasaas, taasi oo si deg deg ah ay uga jawaabeen ciidamada” ayuu yiri Kenneth Nielsen.
Taliska ciidamada Badda Denmark waxay kaloo sheegeen in israsaaseyntaasi ka dib ay maleeshiyadii Soomalida qoriyihii badda ku tuureen ka dibna ay is dhiibeen.